Iyunithi Yokuzilibazisa Ethokomele ku-Inner Adelaide - I-Airbnb
Iyunithi Yokuzilibazisa Ethokomele ku-Inner Adelaide
Heathpool, South Australia, i-Australia
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Yen
U-90% wezivakashi zakamuva unikeze u-Yen izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Itholakala endaweni efunwa yiMpumalanga engaphansi kwe-Adelaide, eduze neBurnside Shopping Center kanye neParade Norwood lapho uzothola khona izitolo ze-boutique, imigoqo, izindawo zokudlela, amathofi, amasinema nezitolo ezinkulu. Uhambo lokuya emsebenzini olufushane olusuka e-Adelaide CBD. Imizuzu engama-20 kuphela ukusuka esikhumulweni sezindiza futhi ihlinzeka ngesisekelo esihle sokuhlola i-Adelaide nakho konke engakunikeza.
Amakamelo amabili okulala anikeza ukuzola nokunethezeka; Igumbi lokulala lokuqala elinikeza umbhede olingana nendlovukazi, ifeni yophahla futhi elakhiwe ngezingubo, kanti igumbi lesibili linemibhede yosayizi owodwa futhi elakhiwe ngezingubo. Igumbi lokuphumula liqukethe umbhede usofa ongakhelwa izivakashi ezengeziwe.
Kulabo abanentshisekelo yedolobha abafuna indawo yokuphumula ngaphandle kwedolobha, uzothanda uhambo olufushane, olungaphansi kwe-5km ukusuka e-Adelaide CBD, olunemizuzu eyi-10 ezokuthutha zomphakathi ikuyisa ngqo esenzweni.
Le yunithi ebanzi itholakala esitezi esiphansi, kufaka phakathi:
• I-wifi ye-nbn yamahhala
• I-Smart TV
• Hlukanisa isistimu A/C
• Ikhishi lesimanje elinomshini wokuwasha izitsha kanye nesiqandisi esinosayizi ogcwele
• Umshini wokuwasha i-combo nokomisa
• Kuhlinzekwe ngamathawula, ilineni, ishampoo, okokugeza umzimba kanye nokugeza umzimba
• Kuhlinzekwa itiye, ikhofi noshukela
• I-ayina nebhodi loku-ayina
• Indawo yokupaka izimoto zemoto eyodwa. Indawo yokupaka emgwaqweni engakhawulelwe iyatholakala.
Isikhathi sokungena: 4PM
Isikhathi sokuphuma: 10AM
Zihlole ngokwakho nge-lockbox etholakalayo.
Uma unemibuzo sicela ungangabazi ukuxhumana nami.